Kedu ihe mgbatị ikuku? - Mmega
Isi > Mmega > Total mgbatị ahụ mgbatị - ịza ajụjụ
Kedu ihe mgbatị ikuku?
Ahụmmezi omumelekwasị ahụ gị niile anya, na-eji ọtụtụ akwara dị iche iche eme ka ahụ gị dị ike, ọdịdị, na ụda. Ha nwere ike ikpokọta ọtụtụ ụdịmmega ahụ, dị ka mgbanwe, ike, na ọzụzụ iguzogide.17.12.2019
Ọ dị mma, ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-eme ụzọ ahụ m mere tupu m na-eme ọkpọ ọkpọ onye na-amu amu. Aga m eme ya ihe anọ na ya taa, n'ezie agbanyego m na ya ma atụfuru m otu ngalaba ka m wee taa onwe m ahụhụ ma taa gị ụta site n'ime mmezi. Ka i wee nwee ike ime ya ise.
Mgbe m gbara mpi, m mere asatọ. Asatọ bụ ebe m zukọtara. Ọma olee otu i si eji ya? .
Okirikiri? Ọfọn, ịnwere ike iji ya na ngwụcha mgbatị gị, dị ka nhazi zuru oke, yabụ ikwu okwu. Ma obu, oburu na ichoputa na ikike gi di nma ma ichoro ime ka aru gi di nma, mee ya tupu mgbatị gi. Mgbe ị kpoo ọkụ, wụpụ, ikekwe mee ọkpụkpọ ndò, wee nwee ike.
Oge ụfọdụ mgbe m matara na enweghị m ike ọ bụla, achọrọ m ịrụ ọrụ ike gwụrụ, m na-ebu ụzọ chọọ imeziwanye ọnọdụ m. Anyị ga-eme nke ahụ, ọ nwere kicks na abs, tụgharịa-ka inupụ-elu, mgbe ahụ ugwu ugwu, mgbe ahụ-hop-hops. Mgbe ahụ burpees, mgbe ahụ, akpụkpọ ụkwụ.
Ngalaba nke ọ bụla nwere sekọnd 15 na sekọnd 30 d izu ike, mgbe ahụ anyị tụgharịa ya wee bido. Ya mere, anyị na-eme agba ise, anọ zuru ezu, nke ise ma ọ bụrụ na agbaghara m mmega ahụ. Dịkwa mma, ugbu a, cheta bọtịnụ ịdenye aha.
Ọ bụrụ na ịchụsasị jab ahụ, jiri aka nri gị pịa ya, pịa ya n'okwu na-eduga gị, ihe niile ị nwere ike ime iji pịa bọtịnụ ntinye, ọ dị mma ka anyị bido ọzụzụ! Ọ dị mma, aka dị njikere n’azụ isi, mkpịsị aka na-etinye aka ma ọ bụ na-emetụ aka, ikpere aka na-emetụ ikpere aka, jide n’aka na ị na-eku ume, na-aga n’ihu. ige Ngwá egwu dị egwu ♪ niile dị mma, gbanwee, gbanye elu! Naanị na-agbanwe agbanwe. Mee ka obi gị ma ọ bụ afọ elu ya metụ ala.
Kupusi iku ume n’ike n’iru. Na na na njikere? Gbanwee n’elu ugwu. Na-agba ọsọ ọsọ.
Ikpere ikpere, gbuo ikpere n'ala. Right Ihe niile, Punch Hops, ugbu a ọ bụ naanị ntakịrị hop. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu na ikpere gị, gbagote ntakịrị elu.
Ma ọ bụ i nwere ike ịdakwasị ikiri ụkwụ gị n’ala ma ọ bụrụ na nke a na-esiri gị ike. Ana m eme ihe abuo n'otu oge, mana ị nwere ike ịme otu kụrụ n'otu hop, ọ bụ gị ka ọ dị n'aka. Kwadebe burpees, gawa! ♪ M na-eme ihe dị ka isii na 15 sekọnd ndị ahụ, enwere ike 7 ma ọ bụrụ na m na-agbasi mbọ ike. Ọ dị mma, mee ọsọ ọsọ, aka ọsọ ụkwụ na-enwu .GGoGo, Go, Go, gGo, goGo, Go, Go, Go, Go, Go, Go, Go! , Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaba! , Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa. je, je, je, jere, jere, jisie ike, bia, je, jisie ike, je, bia, je, bia, juwa, hu, nebe ahu, si, Je, je, chia, bia, nebe ahu. je, je, jee, jee, jee, je, jayi, je, je, jisie ike. jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee. gaa jee jee jee jee jee jee jee jee ije go jee ije gaba ebe ozuru ala! Jee, jee, gawa, gawa, gawa! Kwaa, kwali, kwalie! Na oge, zuru ike.
Mee ka ahụ gị zuru ike ruo n’ókè i nwere ike. I nwere ihe dịka 30 sekọnd iji zuru ike. Were obere inu mmiri mgbe ịchọrọ ya nke atọ ma ọ bụ nke anọ ma ọ bụrụ na agbaghara m omume ọ bụla.
Ya mere, anyị gbakwunyere okwu daashi iji mezuo nke ahụ. Na mkpokọta anyị ga-enwe ọtụtụ ọrụ iji rụọ gburugburu anọ na atọ. Settọ ntọala maka ịgba ụkwụ na igwe kwụ otu ebe, na azụ, zuru ike na
ihu aka omume
Gaba! Aka ekpe, aka nri, aka ekpe, aka nri, gbalia idebe otu uzo. Ngwa ngwa, ma otu ebe site na usoro niile. Iku ume, iku ume, ikpere aka ikpere.
Na-akwụsi ike, kwụsie ike. '' Njikere? Push-acha ọkụ, gaa! Otu dika na mbu. Na-agba ọsọ, na-ekupụ ka ị na-asọ.
Ndị a dịịrị m mfe, ugbu a, ha siri ike. Akụkụ dị iche iche na-agbanwe dabere na ahụike na ike. Njikere? Nnennen n'ime ugwu! Gbalịa idobe ahụ gị aka, ogologo ije dị mma, otu otu.
Ọ bụghị ụkwụ abụọ na-emetụ ibe ha aka n'otu oge, enweghị ntanye, naanị otu ụkwụ n'otu oge. Jụrụ ikpere Njikere? Punch Hops! Naanị obere obere bounces, abịa inch si n'ala.
Ọ bụrụ na ikpere gị ga-enwe oge siri ike ịbanye na ndị a ntakịrị, ọ ga-adị ka ụlọ ọrụ gọọmentị. Otu ntụmadị site na hop ma ọ bụ abụọ. Njikere? Nnennen n'ime burpees, gawa! Nwere ike ịhụ otu m siri edozi ihe ndị a, ntụgharị dị ezigbo mma.
Ewezuga ịgbanye igwe kwụ otu ebe iji kwalite, ntụgharị dị ezigbo mma. ♪ Ma nwuo, gawa! Ngwa ngwa, ụkwụ ọsọsọ, GGoGo, Gaa, Gaa, gawa, gawa Go, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa! je, je, jee, jee, jee, je, jayi, je, je, jisie ike. je, je, jee, jee, jee, je, jayi, je, je, jisie ike. je, je, jee, jee, jee, je, bia, je, juwa, je, jee, jee. gaa, jee, jee, gaa, laa, jee, gaa, gawa, gawa! Los, gaa, jee, gaa, gaa, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga, na-aga. je, je, jee, jee, jee, je, jayi, je, je, jisie ike. jee, jee, jee, ga, la, bia, gara, gawa, gawa! Gaba! ♪ Hapụ! Na oge, nnukwu ọrụ! Nke a setịpụrụ nọmba 2.
Lee, m nwere inu nke mkpụrụ vaịn Perrier. Perrier, ntakịrị ntakịrị mmiri na-egbuke egbuke n'ụtụtụ. Jide n'aka na ị na-eku ume, gbasapụ aka gị, belata ubu gị .Ghazie onwe gị maka ịgba ọsọ igwe ọzọ.
Zuru ike dị ka o kwere mee. Ma gawa! Gba ụkwụ, ikpere aka na ikpere gị! Bie ume, aka n'azụ isi gị, mgbe niile! ♪ ♪ Na-aga n'ihu, na-aga n'ihu, na-agbanwe agbanwe
Na Pushups! Bịanụ! Mee agbatị zuru ezu na ndị a, ọ bụghị nke dị mkpụmkpụ! Kuru iku ume, kupụ ume ka ị na-asọ! Oh, ọ ga-esi ike, ọ ga-esi ike. Usoro nke atọ na-ejide azụ. Punch Hops! Nke a bụ ezumike maka m, kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị.
Pushups siri ike karị. Mana ị ga - achọta ị niile ga - enwe adịghị ike na ume mgbe ị na - eme usoro ndị a. Ma tinye onwe gị, n'ọmụma, gawa! Gbalịa ịbanye ma ọ dịkarịa ala isii! Ọ bụrụ n ’ọsịsọ n’ezie ị ga - abanye na asaa na - abịa. Na na na, na na akpụkpọ ụkwụ na-enwu, ka anyị gaa, nke ahụ bụ akụkụ egwuregwu.
Gbaa oso, gbasala, ka aka gi tugharia. ♪ ♪ GGoGo, Gaa, Gaa, GGo, goGo, Go, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa! je, je, jee, jee, jee, je, jayi, je, je, jisie ike. jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee ebe a, jee jee, jee, jee, jee, jee, jee, jee, Jee, bia ebe a. gaa jee jee jee jee jee jee jee jee jee jee, jee, gaa, gawa, gawa! Gaba! Gaba! Gaba! ♪ Ọsọ, Ọsọ, Ọsọ! Na na na, mma! ♪ ♪ N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nchịkọta ise, echere m ime anọ, mana m na-eme ntakịrị karịa n'ụbọchị, yabụ mgbe ịmechara nke a, ị nwere ike ịmalite n'oge ọ bụla ma mee usoro atọ ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme asatọ. ♪ ♪ Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ime ha, jiri ha mee ihe ị chọrọ.
N'oge ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ bụ ịnweta ihe mgbawa na ngwa ngwa, mana f Kpebie ijeụkwụ gị. Dịkwa mma, zuru ike, kwadebe maka usoro ọzọ. Ma gaba, ịgba ígwè, dị ka ọ dị na mbụ! Na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe na ngwa ngwa! Na-eku ume. ♪ ♪ Na pushups! Dị ka ndọtị zuru ezu dị ka o kwere mee! Ha na-esiwanye ike! Push site, mara mma! Nrigo! Chọọ ijeụkwụ gị! Aka ekpe, aka nri, aka ekpe, aka nri, aka ekpe, aka nri, aka ekpe, aka nri, aka ekpe, aka nri! ♪ Otu ukwu na otu oge, metu aka aka, aka emetu! Na ogologo n'ime ọkpọ.
Naanị obere obere jumps na bọọlụ nke ụkwụ gị. ♪ Chọpụta omimi na usoro ị masịrị gị. Abụọ na hip, ọ bụrụ na ị nwere ike.
Ma banye na burpe, gaa! Ugbu a ka ndi burvees, ndi ozo
Anyị na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịbu, yabụ na ọ baghị uru ugbu a. Will ga-azụ ụkwụ gị otu ị nwere ike. Lekwasị anya n'ụkwụ gị! Na akpụkpọ ụkwụ, Ọsọ! Hapụ aka gị, tụgharịa, tụgharịa. Oh, dị ịtụnanya, ọmarịcha ọrụ! Ọrụ dị mma!, Ya mere, zuru ike
Were mmiri ara, gbaa mbọ hu iku ume. Na-agagharị ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Anyị na-akwado maka nke ikpeazụ.
Ọ bụ ya. Kickgba ụkwụ! GGoGo, Gaa, Gaa, jee, jee Go, jee, gaa, gaa, Gaa, gaa. je, je, jee, jee, jee, je, jayi, je, je, jisie ike. jee, jee, jee, jee, ga, bia, bia, bia, bia, laa, laa, bia, bia, la, gara! Jee, jee, gawa, gawa, gawa! ♪! Ikpe ikpe ikpeazụ ga-esi ike, nke ahụ bụ eziokwu. Na ihe ntinye aka, gaba! Bepụ ha! Oh, ọ ga-esiri m ike, nke ahụ dị mma.
Aghaghị m ịrụ ọrụ na nkwụsị m n'enweghị obi abụọ ọ bụla. Gaanụ, gaba, gawa, onye ugwu! Ọbụna ijeụkwụ, aka ekpe, aka nri, aka ekpe, aka nri! Aka ekpe, aka nri, aka ekpe, aka nri! Were ikpere gị bilie! ♪ ch Punch hops, ngwa ngwa! Paw! Ike! Paw! Otu aka ma obu abuo, ihe obula ichoro. Banye n’afọ gị. ♪ Ezi, inupụ ikpeazụ ikpe nke burpees, mma! N'elu! Up! ♪ Ọ dị mma, hichaa akpụkpọ ụkwụ gị, ka anyị gawa! Ọgwụgwụ nnukwu, ọsọ, ịkwanye, ịkwanye! Ngwanu, ngwa ngwa! GGoGo, Gaa, Gaa, gGo, goGo, gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa, Gaa. Gaba! Gaba! Gaba! Gaba, gawa, gawa, gawa! Reat Kwee
Zuo ike, jegharịa. Kelee onwe gị na ịrụsi ọrụ ike a. Ihe ndị a bụ ihe m mere n'oge asọmpi ahụ.
Ha adịghị mfe. Ugbu a cheta ịlele mmega ahụ m na - eme, pịa pịa igbe ọ bụla iji lelee ụfọdụ ederede m ọzọ, mgbatị ịkụ ọkpọ. Enwere m ọtụtụ mgbatị ndị ọzọ maka ịnwale ma nwee obi ụtọ, yana maka nke ọ bụla n'ime ha, ị nwekwara ike ịga na weebụsaịtị m https://precisiontriking.com wee budata faịlụ ọdịyo ozugbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwere faịlụ ndị a na ebe ọ bụla. gị gaba.
Ọ dị mma, daalụ maka ikiri ụmụ okorobịa! Udo!
Mgbanwe ahụ ọ dị mma maka ụkọ ibu?
Nnyocha achọpụtawo ugboro ugboro na ọzụzụ siri ike dị ka MetabolicNtụ oyidị irè karịa ụdị mmega ahụ dị ala maka ọkụabụbama meziwanye ahụike obi.
O doro anya na ndị ọkà mmụta sayensị lere ya anya. N'ọtụtụ ọrụ, ka ị na-atụkwu, ka calorie gị na-erekwu. Ugbu a, ọ bụrụ na ị dịrị kilogram 160 ma ọ bụ kilogram 73, ị ga-akpọ ihe dị ka calorie 250 ọkụ maka nkeji iri atọ nke ịgba mwe mwe ọsọ.
Ọ bụrụ n ’ịgba ọsọ ọsọ ọsọ dị 10 kilomita / h, ị ga - akpọ ihe dịka calorie 365 na minit 30. N’otu oge ahụ, ị ​​ga - ere ihe dịka calorie 130 ruo 220. N'izugbe, ị na-agbanyekwu calorie kwa otu oge karịa ka ị na-eji oke ibu na otu mgbalị.
Ma nke ahụ abụghị naanị ihe ga-atụle. Naghị arụ mgbatị ahụ? Ọzụzụ ibu na - enyere gị aka ịmịkwuo calorie mgbe ị naghị emega ahụ. Ọzụzụ siri ike dị irè karịa kadio na iwulite ahụ ike.
Mkpụrụ ahụ na-erekwu calorie na ezumike karịa anụ ndị ọzọ dị ka abụba. Ọ bụ ya mere ị ji nụ na ịkpụzi akwara bụ isi ihe iji mee ka ọnụ ọgụgụ metabolic izu ike gị, ike izu ike gị, nke na-ezo aka n'ike ike ị na-ere mgbe ị na-ezu ike. Ọmụmụ ihe a tụrụ izu ike nke ndị sonyere n'oge izu 24 nke ọzụzụ dị arọ.
N'ime ụmụ nwoke, ọzụzụ ike ugbu a rụpụtara ịrị elu 9% na metabolism izu ike. Mmetụta dị na ụmụ nwanyị nwere mmụba nke. belata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4%.
Ihe omumu nke ike a ghaghi abawanye, kama o ga-abawanye site na obere ego. Agbanyeghị, ọzụzụ dị arọ nwekwara uru calorie ndị ọzọ dị mkpa maka uru calorie n'ime awa ndị na-eso ọzụzụ ọzụzụ dị arọ ma e jiri ya tụnyere mgbatị cardio. N'ezie, enwere akụkọ banyere mmụba izu ike zuru ike ruo ihe dị ka awa 38 mgbe ọzụzụ dị arọ, ebe ọ bụ na enweghi mmụba dị otú a na akuko. Uru na-ere ọkụ nke ọzụzụ dị oke abụghị nanị na oge ahụ.
Kedu otu HIIT si arụ ọrụ na Calories Na-ere Ọkụ? ego? N'ezie, enwere ọmụmụ ihe atụlewo HIIT na mmega ahụ nke nkịtị. Nnyocha banyere ihe karịrị 400 ndị buru oke ibu na ndị buru ibu buru ibu chọpụtara na HIIT na mmega ahụ nke ọdịnala na-ebelata oke abụba na oke olu site na otu calorie dị ka cardio ọdịnala, ọ bụ ezie na nke a dabere na mgbatị ahụ. Dị ka ọ na-adị, ị na-ere otu nọmba calorie na HIIT, mana n'oge dị mkpirikpi.
gịnị bụ mmetụta nke ike ọgwụgwụ ike na ike gị
Na njedebe, ma akụrụngwa ma ọzụzụ ike nwere ike inyere gị aka ịrịa ahụike. Mgbatị ahụ nke obi na-ere calorie karịa ike ọzụzụ, mana metabolism gị na-adị elu ogologo oge mgbe ị nwesịrị ọzụzụ. Na mgbakwunye, ọzụzụ dị oke mma maka iwulite akwara.
N'ihi ya, ezigbo usoro mgbatị ahụ kwesịrị ịgụnye ma cardio na ọzụzụ ike, ọ bụghị naanị otu ma ọ bụ nke ọzọ. Daalụ maka ikiri. Gbalia ihu na inye mkpuru edemede a isi oburu na ichoputara ya ihe omuma.
Echefukwala ịdenye aha na channelụ Healthline Authority Nutrition YouTube site na ịpị uhie bọtịnụ Idenye aha n'okpuru isiokwu a. (egwu na-ada ụda)
Kedu ihe kpatara mgbatị ahụ zuru oke ji dị njọ?
Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị dị mma karịa egwuregwu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-atụnye ihe dị arọ nke na-eme ka mgbịrịgba ahụ sie ike,zuru-ahụ emenwere ike ibu nsogbu. Nke dị elu gịọzụzụmpịakọta oge mgbake ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-akụ otu ahụ ike kwa ụbọchị abụọ ị na-egbochi uto.03.09.2014
Kedu ihe bụ ụmụ okorobịa, Scott si Muscularstrength.com ebe a. Yabụ na ọ dịka onye ọ bụla na-ahapụ ịhapụ bro ya na mgbatị na-agba ọsọ ma na-awụli elu na mgbatị ahụ n'oge na-adịbeghị anya, gụnyere m, mana gịnị kpatara ya? N'ihi na ọ bụ okwu ọchụchọ na-ewu ewu maka isiokwu na YouTube, ma ọ bụ n'ihi na eziokwu dị ọtụtụ n'azụ ọtụtụ usoro uto, yana ịmanye ahụ gị imeghari ka arụ ọrụ na-adịkarị elu chọrọ nwere ike inyere gị aka inweta ahụ ike.
Ọ dị mma, ọ bụrụ n’isiokwu a ị kwenyeghi, aga m esoro gị kerịta ihe ise mere ịgbanwee nwere ike ịbụ mkpebi kacha mma maka uru gị. Na njedebe nke isiokwu m ga-ekwu maka ahụmịhe nke m. Ihe kpatara nọmba otu, dị ka anyị kwuru, ọtụtụ oge na-eto eto.
Nke a nwere ike bụrụ echiche kachasị mkpa ịchọrọ ịghọta ma anyị ekwuola maka ya. Na nkenke, mmadụ abụọ na-eme otu ọnụọgụ ọrụ ga-enweta nsonaazụ dị iche dabere na mgbe ha mere usoro ndị ahụ. N'ime ọmụmụ ihe a nke 2019, ụmụ nwoke 18 kewara abụọ, tupu mmalite nke ọmụmụ ihe ahụ, ha nwalere ihe kachasị elu maka nchịkọta bench, squat, na nsochi ike mgbe ha mechara otu ụgbọ oloko na bro na nkewa na nke ọzọ ozu zuru ezu ruo ụbọchị ise azụwo otu izu.
Na ngwụcha izu asatọ ahụ, enweghị ezigbo esemokwu dị n'etiti ike abụọ dị n'etiti otu abụọ ahụ, mana ha kpebiri na otu ọzụzụ ahụ zuru oke nwere ike nweta mmetụta hypertrophic kachasị elu. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, kama ịkụpịa obi gị site na usoro anọ nke mmemme ise dị iche iche, ị nwere ike ịbawanye uto site na mmega ahụ mmega ahụ ihe karịrị ụbọchị ise. Ebumnuche ebe a bụ ihe ọzọ iji kpalie obi ma nọgide na-akpali ya mgbe ị na-akwali.
Mkpụrụ ahụ gị nwere ike imeghari na oge ọzụzụ siri ike karị, njikọta protein na-ewe naanị 24 ruo 48 awa. Ndị mmadụ, nke a bụ windo uto gị, yabụ agbanyeghị awa ole ị nọrọ na mgbatị ahụ n'ụbọchị ụbọchị, ka ụbọchị abụọ gachara obi gị ga-agbake ma mebe na-eto eto. Dika anyi maara, mmeghari ihe ndi ozo dika ihe ndi ozo na-enye anyi ohere ibubata ibu karia ma e jiri ya tụnyere mmegharia di iche dika pec oche ma obu dumbbell na-efe efe, ma anyi na-agbanwe site na ngwongwo na omume iche na ulo oru kewara n'ihi na ike gwuru anyi mgbatị ahụ na-agagharị ma na-arụ ọrụ nke ọma, anyị kwesịrị ịgbanwee omume ndị na-anaghị achọ ike dị ukwuu, mana na ahụ zuru oke enweghị ihe kpatara na ị gaghị enwe ike ịpị mgbatị ọ bụla.
May nwere ike ịbụ obere ọnya, mana mgbe ị gbasịrị ọkụ ma ọ bụ abụọ, ike gị n'ozuzu ka ga-enye gị ohere ibubiga obi gị karịa karịa nke ị nwere ike ime site na pec peck ma ọ bụ dumbbell fly. Ihe kachasị mkpa ebe a bụ ịghọta na ị ka na-azụ otu olu zuru oke, mana iji ọzụzụ zuru oke ọzụzụ ọzụzụ na-abawanye site n'otu ụbọchị kwa izu ruo ụbọchị ise kwa izu yana ọrụ na oge mgbake maka otu ọzụzụ olu. Nke a wetaara m ihe nke abụọ, mgbake.
Dị ka onye mbido, ị nwere ike ịme ihe dị ukwuu ruo mgbe ahụ gị dị oke egwu ịmegharị, yana ka ị na-emewanye okenye, mgbake gị niile nwere ike ọ bụghị otu ọ dịbu. Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịrụ ọrụ na azụ, n'agbanyeghị na ha anaghị arụ ọrụ otu ahụ ike. Ma site na mgbatị ahụ dum, ị nwere ma ọ dịkarịa ala otu ụbọchị ezumike n'etiti mgbatị ahụ ọ bụla ka ọ bụghị naanị mọzụ gị kamakwa usoro ụjọ gị nwere ike ịgbake.
Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ọ excitedụ dị ukwuu ịrụ ọrụ ma nweta uru anyị na-echefu, ihe mbụ anyị kwesịrị itolite na nke ahụ bụ izu ike na izu ike. Were m dịka ọmụmaatụ na nwata, ọ bụrụ na agbaghara m ụbọchị mgbatị ahụ mgbe nwanne m nwoke kewara mgbatị ahụ, m ga-apụ apụ ma ọ bụ maka ebumnuche dị iche iche. Nke mbụ, n'ihi na enwere m mmetụta nke umengwụ n'uche nke mbụ, ọ dịghịkwa mgbe ọ bụụrụ m na izu ike mere ka ahụ m zuru ike ma too.
Amaara m na m bụ onye isi ike n'oge m dị afọ iri na ụma na nọmba nke abụọ, ọ bụrụ na agbaghara m otu ụbọchị, ọ pụtara na usoro m niile maka izu ahụ gafere. Ya mere ọ bụrụ na Tuesday bụ ụbọchị ogwe aka ma agbaghara m Tuesday na Wednesday bụ ụbọchị ụkwụ, gịnị ka ị na-eme? ime? Mafere ụbọchị ụkwụ, nri? Karịsịa ma ọ bụrụ na i nweela atụmatụ maka izu ụka ma ị nweghị ike imezi ha. Daybọchị furu efu, ekwenyesiri m ike na ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịkọwa na nke ahụ, mana site na ọzụzụ ahụ zuru oke ị nweghị nke ahụ. Ou nwere ike imegharị ahụ ụbọchị atọ n'izu, ma ọ bụ ọbụlagodi ụbọchị ise n'izu, ma ka nwere oge gbakee ma too.
Ọ bụrụ na ịgbaghara mgbatị ahụ, ihe niile ị ga - eme bụ ịmegharị oge gị ka ọ bụrụ otu ụbọchị. N'adịghị ka mgbawa ọ bụla, nke a anaghị emetụta izu gị n'ihi na mgbatị gị niile bụ ahụ. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe dị ka oge ịmịnye ọbara ị kwesịrị ịrapara mgbe ị na-emega ahụ dum.
Ọ bụrụ n ’ọ na-afụ gị ụfụ nke ukwuu iji na-emega ahụ taa, ị nwere ike iji ya dịka ụbọchị izu ike ọzọ ma ọ bụ ikekwe ụbọchị ezumike zuru oke ebe ị na-emega ahụ na kaadi ma lekwasị anya na mgbatị ma ọ bụ mmegharị ahụ. Na-echeta mgbe niile na mgbe ị na-ezu ike, kwe ka akwara gị gbanwee ma zuru ike, ndị a bụ ihe abụọ dị mma maka uto ahụ. Ọbụna n'ụbọchị izu ike nọ n'ọrụ, ị ka na-echekwa teknụzụ ma ọtụtụ n'ime gị ụbọchị ezumike zuru ike.
Eleghi anya naanị ihe ịchọrọ ịmalite cardio, ma ọ bụ nke kachasị mkpa, ị yourụbiga mmanya oke n'ihi na amaara m na ọtụtụ n'ime gị ga-awụlị abs. Site na ngwụsị nke mgbatị ahụ gị, ị maara onye ị bụ, Ricky. Reason nọmba atọ, àgwà vesos nke ukwu.
Nke a bụ ihe m chere ga-eme ka ọtụtụ n'ime gị kwenye mgbatị ahụ zuru oke dịka ọ bụ nnukwu ihe mkpali maka m. Mgbe ị rutere mgbatị ahụ na ụbọchị obi maka B. Chest na Triceps Day.
Site na ọzụzụ nkewa, ị maraworị na ịkwesịrị ịme opekata mpe okpukpu anọ ma ọ bụ ise wee were mgbatị ahụ abụọ abụọ ruo atọ. Ma oburu na m n’eziokwu, odighi mgbe o wutere m. Enwere m mmasị ịmega ahụ, ọkachasị ụbọchị obi na ụbọchị, mana ụbọchị mgbe ike gwụrụ gị ma ọ bụ dị mkpụmkpụ n'oge, ma ọ bụ ike gwụrụ gị ịme otu omume ahụ, nwere ike ime ka ị ghara inwe mkpali.
Ọ na-eme. O nwedịrị ike ọ gaghị abụrịrị ihe maara ihe, mana oge ụfọdụ anyị na-achọpụta na anyị anaghị agbanye nnukwu ike naanị iji hụ na anyị nwere ume zuru oke wee gafere mmemme niile maka akụkụ ọ bụla nke ahụ. Ma na ahụ gị niile ị nwere otu ma ọ bụ abụọ mmega kwa akụkụ ahụ, nke bụ n'ezie ihe na-akpali m.
Achọpụtara m na m na-eme ka mmega ahụ ọ bụla sie ike n'ihi na amaara m na mgbe m mechara, m ga-agbanwe n'akụkụ ọzọ nke ahụ. Ọ na-atọ ụtọ, ọ bụghị ya? Ọ bụrụ na nke a bụ ihe gị, ọ bụghị gị niile nwere ike inwe obi ụtọ a, mana ndị dị mkpa, ọ bụrụ na ihe niile ị ga - eme bụ ime ọkwa ise dị elu na bench, ị na - apị ihe. Ị na-aga? ịbụ onye a kpaliri ịkwanye ike dị ka o kwere mee na nke ọ bụla n'ihi na ịchọghị ịnweta gas na tank maka okpukpu anọ ọzọ.
Ihe kpatara ọnụọgụ nke anọ siri ike ịmebe isi. Mmeghari ihe ndi ozo dika chin-ups, squats, deadlifts, bench presses, na bible n'elu ahịrị bụ ihe isi n'ọtụtụ usoro mmega ahụ maka ihe kpatara ya na nke ahụ bụ n'ihi na ha guzoro ule nke oge dị ka ndị na-ewu ahụ ike. Ọ dịghị mkpa ịmegharị wiil ahụ, nke ahụ bụ eziokwu karịsịa maka ọzụzụ zuru oke n'ihi na ị na-azụ ọzụzụ naanị otu ma ọ bụ abụọ na-arụ ọrụ n'otu akụkụ ahụ.
Ikwesighi imeputa ihe karie ihe. Mee ka ọ dị mfe ma rapara na ihe na-arụ ọrụ. N'ezie, ka oge na-aga, ịnwere ike ịmụ usoro dị elu ma ọ bụ ọdịiche dị iche iche nke otu mmegharị ahụ ma ọ dị mma, mana buru ụzọ mee isi.
Nwere ike iji ọzụzụ ndị a zụọ ọzụzụ ruo ọtụtụ afọ ma ka na-ahụ uru na ike, mana agbaghala ịdị mfe na enweghị ike. Mepụta ihe abụghị ihe dị mma mgbe niile. Nke a bụ ihe mere anyị ji enwe ahịhịa Insta, na n'ihi na mgbatị ahụ niile dị mfe dị ka nke ahụ, nke ahụ apụtaghị na ha bụ ndị mbido.
Ọ bụ gị kpatara etu ọzụzụ gị siri sie ike. Gosi otu ibu ị buliri, oge izu ike gị, na oge ole ị na-eji akparịta ụka na ekwentị gị ma ọ bụ nzuzu na mgbatị ahụ ga-ekpebi otu mmega ahụ gị. Na na-ewetara m nke ise m na nke ikpeazụ mere nke zuru ozu ọzụzụ na ọ bụ maka m, ma tupu anyị amaba n'ime ahụ dum ọzụzụ m, ma ọ bụrụ na gị e.
Ọ bụrụ na ị na-anụ ụtọ isiokwu ahụ, kpatụ na ndị isi na YouTube ka na-egwu ọwa m na anaghị ezigara gị niile ọkwa ọhụụ. Ya mere, inwetakwu ihe na-amasị gị bụ naanị otu ụzọ iji melite algorithm. Ya mere echefula ịpị bọtịnụ Like wee kelee gị maka nkwado gị.
Ọzọkwa, agam ekwu ntakịrị ihe gbasara otu m ga - esi wee jikwa ọzụzụ zuru oke nuklia na ahụ m zuru oke. Ma n'ihi na m na-achọzi ọnyà na ike shrugs, ọ ga-amasị m ịnye ụzọ abụọ Mfe Mfe ebe m na-eji ha. Enweela m aka nke ukwuu na eriri aka m.
Ma mgbe ha na-eweli ibu dị arọ, ha ga-adị mma karịa na nkwojiaka ma ị nwere ike ị kechie ha gburugburu ebe ahụ. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbanye, naanị ihe abụọ ka ị ga-eme. Number otu, kwuo okwu n'okpuru.
Ọ bụrụ n ’ị chere na onye na-egwu Joker na-akọ akụkọ n’ihi na ara na-agba ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chere na ihe niile mere na fim ahụ bụ eziokwu n’ihi na m mechara hụ ya n’izu gara aga, m hụkwara ya n’anya, m na-eche ihe niile mere ma e wezụga ebe ha gosiri na ọ bụghị. 'n'ezie. Ihe ndị ọzọ niile mere n’ezie. Na ọnụ ọgụgụ abụọ, dị mfe.
Dịka na Instagram ma kpado enyi ma ọ bụrụ na ị kwuo okwu na post a. Dịkwa ka ndị mmadụ na-eme mgbe niile, ugbu a ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụtụrụ ihe na weebụsaịtị ha ma hụ na ị na-eji koodu m, MS10 maka 10% pụọ na weebụsaịtị niile. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịnabataghị usoro mmega ahụ m na-eme kwa izu, buru ụzọ lelee ha.
Ricky na-edezi ihe ịtụnanya n’ebe ahụ. Ọ masịrị m nke ukwuu. Echeghị m na ọ nwere ike ịrụ ezigbo ọrụ a, mana m ji gị eme ọnụ.
Enwere m obi ụtọ maka gị, Ricky. Nke a bụ iji mee ihe ọchị banyere edemede ikpeazụ m mere, yabụ emere m ngbanwe ahụ gaa n'anụ ahụ ihe dị ka izu ise gara aga na mgbe m na-enyocha ihe karịrị akarị, abịara m ọmụmụ ihe niile m mere m gụrụ na nkwubi na m erubeghị oke nke m, mana emegoro m na njedebe nke mmemme dị ka Push, Pull Legs, Upper Lower na Bro Splits nwere ike inye m. Enwetụbeghị m mmemme ebe m na-arụ ọrụ ahụ m niile ụbọchị anọ ruo ụbọchị ise n'izu, ekwenyere m na mmụbawanye ụba na-eduga n'ịkwadokwu, ma lee ihe m hụla kemgbe ịmalite.
Nke mbụ, m na-atụ anya mgbatị m ọtụtụ karịa. Ọ na-atọ m ụtọ inwe ndepụta ndepụta dị mkpirikpi maka akụkụ ahụ m ọ bụla na ọ bụ ya mere m ji agbali ime ka usoro m sie ike. Nọmba nke abụọ, izu abụọ izizi siri ike dịka ahụ m gbanwere ugboro ugboro, mana ihe niile m mere iji merie ike ọgwụgwụ m bụ ị mya ntị na ahụ m wee kwuo ihe abụọ, nyekwuo m nri ma nyekwuo m ezumike.
N’ihi nke a, a na m erizi nri karịa, rute nso na calorie 3,300 ruo 3,500 ma e jiri ya tụnyere 2,500 m riri tupu, na anaghị m enwe nrụgide niile nke ịga mgbatị ahụ oge niile. Ihe m na-ekwu? Adịghịzi m atụ ụjọ ịhapụ mgbatị ahụ n'ihi na mgbatị ọ bụla bụ mgbatị ahụ zuru oke. Na mgbe ike gwụrụ m, m na-ezu ike, naanị iri nri na-arụ ọrụ na-esote ụbọchị.
Nọmba atọ, echere m na nke ahụ ga-amasị ọtụtụ gị. Ana m enweta nfuli kachasị mma m rụtụrụla na ndụ m tupu ọ ga - ewe ihe omume abụọ na atọ tupu, dịka ọ ga - adị na ahụmịhe mgbapụta dị ezigbo mma, jiri ya mee ihe. Ma ugbu a na nke abụọ ma ọ bụ nke atọ nke mmega ahụ ọ bụla m na-eme, mgbapụta ahụ na-agbanye ma ọ na-agbasi ike.
Nọmba nke anọ, enwere m ike ịnwale usoro ọzụzụ ọzọ n'ihi na m na-eme mgbatị ahụ zuru oke ụbọchị anọ ruo ụbọchị ise n'izu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ na-ewute m nke ukwuu iji bulie arọ, enwere m ike ịgbanwe otu mgbatị m na otu mgbatị ahụ, mana kama ibuli mgbatị asatọ ruo 10 na otu, enwere m ike ilekwasị anya na nkwụsị ma ọ bụ nnukwu. Dị ka ọ dị na vlog nke ikpeazụ anyị wepụtara na Sọnde na usoro dịka nke a, m na-ekwusi ike na nrụgide metabolic karịa na nrụgide igwe.
Ihe nke ise mere m ji eche bụ na agaghịzi m ahọrọ ịhọrọ cardio ma ọ bụ ike ọzụzụ. Ndi be anyi, enwere m obi uto ime ihe dika igba osobo ma na acho m ibido ozo, mana iji di njikere o na-ewe otutu oge iji ihe dika kilomita ise rue isii. N'oge gara aga, ọ dị m ka m na-egwu egwu ụbọchị m na-eme mgbatị ahụ, mana na ahụ m zuru oke enwere ike ile cardio anya dị ka ụbọchị izu ike.
Ihe nke isii na nke ikpeazụ m chọrọ ịkọrọ gị, ma eleghị anya ihe kachasị mma banyere ọzụzụ ahụ zuru oke, bụ na m na-amalite ịhụ uto ọzọ. Ndi be anyi, a bu m ihe ozo ka igaghi ahu mgbanwe nzuzu. Mana n'ozuzu, ọ bụrụ na i jiri foto na isiokwu m dị nso na ọnwa ole na ole gara aga, akwara m na-ele anya karịa ma achọpụta m karịa n'ubu m na ọnyà na n'ihi na m na-emezi nnukwu ọzụzụ na ubu m na ehi m, enwere m ike Jiri nwayọọ dozie mgbatị m ka m wee nwee ike ime narị ike shrugs na otu narị nwa ehi na-ebuli elu n'ụtụtụ, na mgbe m na-arụ ọrụ n'abalị, m na-ewepu omume ndị ahụ na usoro m.
Ọ dị mfe, mana ịgaghị ewere okwu m maka ya. Gbalịa ya n'onwe gị ruo izu ole na ole ma hụ otú ị dị. Aga m etinye njikọ na usoro evolushọn ahụ m zuru oke n'okpuru nkọwa m pink n'okpuru na mgbatị ọ bụla nwere isiokwu nke ya na mmega ahụ, ụdị na usoro, ị nwekwara ike ibipụta kalenda mgbatị ahụ na mbipute PDF. nke mgbatị ọ bụla, iji mee ka ọ gaa mgbatị ahụ.
Ma ọ bụ naanị soro na ngwa m. Ihe ọ bụla dịịrị gị mfe. Naanị abụla otu n'ime ndị oyi na-atụ na oge na-achọghị ịnwale ihe ọhụrụ.
Ọ bụghị naanị na m na-ahụ uru nke ọzụzụ ahụ zuru oke. Ọmarịcha onye ọ bụla nwara ya na-eche banyere ya na oge na-aga. Ama m na will ga-emekwa ngwa ngwa.
Hey ụmụ okorobịa, aga m etinye njikọ na vlog m kachasị ọhụrụ ebe a n'aka nri ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ụfọdụ mgbatị m na nso nso a. Maka ndị gị ga-achọ ịnwale mmemme m zuru oke nke Evolution, pịa pịa njikọ dị n'okpuru iji budata ngwa Mkpụrụ Ike m. Lee gị ebe ahụ.
Kedu ihe mgbatị ahụ na mgbatị ahụ?
Usoro ahụ 'umenaọzụzụ nkwenye'na-ezo aka na usoro nkemmega ahụnke gosipụtara ụlọume, ibu nakwa ntachi obi nke akwara ọkpụkpụ. Ibidoumenaọzụzụ nkwenye, Ikwesiri iji ikike iguzogide nkwonkwo akwara ka ị wee nweta ihe achọrọ.Nke 10.10.2019
Ọtụtụ n'ime anyị, ọkachasị anyị ụmụ nwoke, na-ahọrọ ebumnobi pụtara ìhè nke ịkwalite onwe anyị n'olileanya nke ịkwalite ahụ ike. N’aka nke ya, iwulite akwara nwere uru ọzọ ị ga-abawanye ma ọ bụ ya mere agwara anyị.
Nwa nwoke nke nwere akwara buru ibu kwesiri inwe ike ibuli ihe di egwu. Ọ dị, e nwere ụfọdụ eziokwu na nke ahụ. Ike ike na-achọkwu ahụ ike ruo n'ókè ụfọdụ, na ịnwekwu ahụ ike na-apụtakarị ike na ị ga-adịwanye ike ma buru ibu ozugbo ịmalite ibuli, dịka ụdị mkpali ọ bụla nke na-akpali akpali ga-enwe ogo nke hypertrophy muscle na ike nweta site na naanị Novelty nke ọzụzụ n'onwe ya na-akpali.
Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na otu agaghị abawanye kpamkpam na-enweghị nke ọzọ, ọ ga-ekwe omume ịzụ otu maka otu. Nke a ga - eme ka otu dị mma karịa nke ọzọ n'ihi ụfọdụ ọdịiche gbasara ahụike nke a tụlere n'isiokwu a. Mana tupu anyị emee nke ahụ, ọ ga-amasị m ịsị ndị obodo Patreon m ekele gị ọsọ ọsọ.
Ha bụ ndị tozuru oke maka isiokwu a nke mere na ekele maka nnukwu ntụnye ahụ m megoro mgbanwe niile m na-akwụ. Na mgbakwunye na ịtụ vootu na aro maka isiokwu ederede, onye ọ bụla nke kwere nkwa naanị otu dollar ma ọ bụ karịa nwere ike ịnweta ohere ugbu a ịgafe na chanel Patreon Discord ma jụọ m ajụjụ. Ọbụna m na-enye ụgwọ ọrụ agwa nke gụnyere avatar gị na Stage PictureFit ejiri mee na isiokwu m.
Na n'elu nke ahụ, ana m agbakwunye ụgwọ ọrụ m na-ezitere gị n'onwe gị, dị ka akwụkwọ mmado na ọbụnadị uwe elu PictureFit nke m ji aka m rụọ, m ga-etinyekwu mgbalị karịa ime nkwa gị bara uru, kama naanị na-enyere m aka na ya iji nọgide na -emepụta ọdịnaya, kamakwa iji gosipụta ekele m ruo ókè o kwere mee. Biko kwadoo PictureFit ọzọ site na Patreon, ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ụgwọ ọrụ ọhụrụ ahụ, ma ọ dịkarịa ala iji nyere m aka ịnọgide na-enye gị ezi ahụike na ebumnuche ahụike na ahụike nke na-adị mwute ikwu na ọ dịkarịghị na ịntanetị na ụbọchị ndị a, ka anyị Dive ntakịrị mgbanwe ndozi. Ubara ike na-ebute site na nguzobe protein proin, actin na myosin, nke na-eme ka mkpokọta mkpokọta.
A na-enweta nke a site na mkpali mmega ahụ zuru oke, dị ka ibuli ihe dị elu, na nri nri dị mma, dị ka iri nri, protein ọzọ. Ike nwekwara ike ịbawanye ụba, ọkachasị maka ndị mbido, jiri omume dị mfe. Dịka anyị niile maara, ịbanye na nka ọhụụ adịghị mfe ma anyị na-ejikarị ike na ume karịa ibido.
Iweli ibu adịghị iche. Ka ị na-arụ ọrụ gị nke ọma ma na-etolite onwe gị n'ihe dị ka squat, ị nwere ike ịgbanye ọtụtụ ibu dị arọ nke ọma. Enwekwara mgbanwe mgbagha neuromuscular, dị ka ịbawanye ntinye na ntinye ngwa ngwa, ma ọ bụ ikike na ọsọ nke usoro ụjọ gị gosipụtara akara akwara gị iji kwenye.
Ọzụzụ na-agbanwe agbanwe nwere ike melite nke a. N'ikpeazụ, e nwere otu okwu biomechanics ọzọ na anyị agaghị enwe ike ịme nyocha zuru ezu dị ka ọ na-achọ ụfọdụ nkọwa nke karịrị nke isiokwu a. Na nkenke, enwere ike ịnweta uru biomechanical dabere na nhazi ahụ gị nke na-emetụta ihe dịka oge ogwe aka na ndị nwere ike imetụta ike a na-etinye na onye ọ bụla Ndi na-edozi na-emekwa ka ahụ ike.
A maara nke a dị ka hypertrophy myofibrillar. Otú ọ dị, e nwere echiche ọzọ nke hypertrophy nke a na-ekwu na ọ ga-erite uru uru karịa ike. A maara nke a dị ka hypertrophy sarcoplasmic, nkwupụta zuru ebe nile nke ihe ndị ọzọ na-enweghị nkwekọrịta protein, dị ka mmiri mmiri, glucose, na sel sarcoplasmic organelles, na-akpata mmetụta ọzịza nke na-eduga na akwara buru ibu na mgbakwunye na hypertrophy myofibrillar.
Ugbu a, anyị amaghị otu esi arụ ọrụ hypertrophy sarcoplasmic, ọtụtụ n'ime akwụkwọ ndị ugbu a nwere mgbagwoju anya. N'ikwu ya, aga m eji obiọma ziga gị na isiokwu Greg Nuckols banyere isiokwu a, nke m na-ejikọta na nkọwa ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị inyocha nyocha zuru ezu. Ma na nkenke, ọzụzụ pụrụ iche CAN, mana ọ bụghị n'ezie, na-abawanye hypertrophy sarcoplasmic na mgbanwe dị iche na eriri n'onwe ya, dị ka eriri eriri, ọkpụrụkpụ, na mmasị ike, nke nwere ike imetụta oke akwara n'ihe metụtara ike.
Ma ebe a kwa enwere oke ejighị n'aka. Mana o doro anya na usoro ọzụzụ kachasị mma maka ebumnuche ya. Obi abụọ adịghị ya na mgbatị kachasị ukwuu maka iwulite ahụ ike. Ihe a na-elekwasị anya bụ n'ogo olu ọrụ.
N’echiche ya dị mfe, mkpokọta olu ọrụ bụ ọnụọgụ nke oge ole ọnụọgụ ugboro ma ọ bụ ibu ibu i buliri. Ebumnuche ahụ ga-abụ ịkwakọba olu dị ka o kwere mee ma bulie olu ahụ site na nnọkọ gaa na izu, izu kwa izu, wdg. I nwere ike ime nke a site n'ịgbakwunye usoro ndị ọzọ, ikwughachi ugboro ugboro, ike, ma ọ bụ mgbanwe na atọ niile.
Dị ka ọ na-adị, bodybuilders na-agba 3 ruo 5 nke 8 ruo 12 reps na-agbasaghị ike, ebe ọ bụ ụdị 'ọmarịcha ntụpọ' maka iwuli elu na obere oge. Otú ọ dị, ọmụmụ egosila na ime ihe ugboro ugboro 100 site na otu, ma ọ bụ naanị 2 ruo 5 ugboro ugboro site na otu, nwere ike n'ezie nweta uru ahụ yiri ya ma ọ bụrụhaala na ngụkọta zuru ezu bụ otu. Agbanyeghị, ike dị obere karịa ịdabere na olu.
Ihe omuma nke gosiputara na ntaneti 100 meputara akwara nke yiri nke nke 5, ndi nyocha ahu choputakwara na n'ihe banyere ike, ndi otu nwere ala reps, onye rụrụ ọrụ n’ime nnukwu ike dị elu ritere nnukwu uru kasịnụ. Otu nnyocha chọpụtakwara uru dị otu ahụ - enwere ike ị nweta squat na bench pịa naanị otu setịpụrụ, ma e jiri ya tụnyere usoro 5 mgbe otu abụọ ahụ nwere otu ike.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ike ibuli ibu arọ dị arọ, ị ga-arụsi ọrụ ike. Mmemme mmemme pụrụ iche ga-eme ka ị rụọ ọrụ na 85 ruo 100% 1-RM, ebe 1-RM bụ oke kachasị ị nwere ike ibuli naanị otu ugboro . Ugbu a, ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịchọrọ ike ma wulite ahụ ike, ọ bụkwa ebe a ka mmemme siri ike na nke kwesịrị ekwesị na-abịa.
Ọtụtụ mgbe nke a pụtara ịchọta ala etiti, dịka ọmụmaatụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrụ ọrụ na ike siri ike n'oge ị na-edekọ maka olu dị ukwuu, ma ọ bụ kewaa mmemme gị ka ị lekwasị anya n'otu akụkụ n'otu oge, iji nyere aka chọta ihe kachasị mma maka gị, biko gaa na Foto PictureFitdiscord anyị na ọtụtụ n'ime uche anyị dị ukwuu nwere ike inyere gị aka E nwere ezigbo ọdịiche dị na usoro physiological, na mmega ahụ dabere na ike na olu.
Ozo, ekele diri ndi otu Patreon m nkwado ma kwado votu a. Ọzọkwa, Kudos ka Encho Mishinev maka mmesapụ aka $ 15 kwa ọnwa. Nnukwu, nnukwu, ekele gị enyi.
Ka o sina dị, na ihe ndị dị n'okpuru ebe a, mee ka m mara echiche gị banyere iwulite ike na ike ụlọ. Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a, biko nye ya nnukwu mkpịsị aka aka ma soro ndị enyi hụrụ gị n’anya kerịta ya! Dị ka mgbe niile, ekele maka ikiri ma nweta protein gị!
Mgbanwe ọ na - ewulite mọzụlụ?
Ikenhaziga-enye gi ohere kadịkwuo akwaraike, ike na ọsọ ma na-enyere gị aka ịgbanwe ọdịdị gị site nana-eke iheọnwụ ọnwụ, nke na-emecha gbanwee ọdịdị gịmọzụlụ. Ọ dịkwa mfe ịmepụta usoro ihe omume na-elekwasị anya na gịnhaziihe mgbaru ọsọ.03/27/2014
Nkwado dị ka kadio?
Usoro ahụ 'nhazi”Bụbu nke e debere nanị maka ndị na-eme egwuregwu, ebe“kadio”Bụ okwu ndị mmadụ na-ejikarị eme ihe. Na isi, ha bụotuihe. Naanị ihe dị iche bụ na itinye sayensị n'ọrụ.
Kedu ihe dị mma maka ịhapụ kadio dị arọ ma ọ bụ ibu?
.B.mgbatị cardiona-erekwu calorie karịa aibu ibu-ọzụzụrụpụta. Agbanyeghị, metabolism gị nwere ike ịdị elu ruo ogologo oge ma emechaaigwekarịakadio, naibu ibueweli bụmmamaka akwara ụlọ. Ya mere, usoro mmemme kachasị mma iji meziwanye ahụ na ahụike gụnyerekadionaigwe.Ọkt 24 2017
Kedu ihe kacha mma iji belata ibu?
Kwesighi ịmega ahụ na oke ikehapụ ibu ibu. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido ma ọ bụ nwee adịghị ike nke anụ ahụ, adịghị ikekadionwekwara ike inyere gị akaọkụkalori nadobepaụnd. Rụ ọrụ ndị a gụnyere ịgba ọsọ, ịgba ígwè, ike ije ije, igwu mmiri, na ikuku.Ọgọst 23 2019
Ekwesịrị m ịme cardio kwa ụbọchị?
Ọ dịghị na-atụ aro elu ịgba na ego nkekadiona-emega gịkwesịrị imeiri akwa ụbọchịma ọ bụ kwa izu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike na mgbatị ọ bụla, na ịwụpụ otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ kwa izu iji zuru ike nwere ike inyere gị aka izere mmerụ ahụ na ike ọgwụgwụ.Ọgọst 10 2020
swiiti na-enweghị akwa fructose ọka sirop
Kwesịrị ịga mgbatị ahụ kwa ụbọchị?
Keduị na-emenamgbatị ahụdị mkpa karịa ugboro oleị na-emeya. Ọ bụrụgị gabakamgbatị ahụọ fọrọ nke ntakwa ụbọchịma agbanyela onwe gị, jiri ụdị na-ekwesịghị ekwesị, ma ọ bụ mechie ahụ gị site na ịdọgharị uche,gị'rena-agaka obere uru karịa mmadụna-agaugboro atọ n'izu ma jiri oge ahụ rụọ ọrụ nke ọma.Ọkt 12 2017
Kedu ụdị mgbatị ahụ bụ nhazi ahụ dum?
Nchịkọta ahụ niile ga - eme ka ị nweta isi mgbatị na isi ụkwụ na klaasị usoro a. A na-enweta mgbatị ahụ a zuru oke site na mmegharị ugboro ugboro na mmemme ndị na-abụghị cardio. Klas a na-eji ogwe ahụ, mgbịrịgba, dumbbells na ndị ọzọ.
Ugboro ole ka m kwesiri ime?
Mee usoro 2 ruo 3 nke ugboro asatọ ruo 16. Omume mgbatị ahụ bụ ụdị mmega ahụ anaerobic. Ha bara uru dị ukwuu maka ahụike gị na ahụike gị, na-eme ka ha bụrụ akụkụ dị mkpa nke usoro ahụike ọ bụla. Ebe ọ bụ na ha anaghị achọ akụrụngwa, ị nwere ike ime ha ebe ọ bụla.
Kedu nke kacha mma mmega ahụ maka ụmụ nwanyị?
Mgbatị A Mmega Reps Dumbbell squat 20 Dumbbell Bench Press 20 Dumbbell Pullover 20 Dumbbell Lateral Bulie 15 5 ahịrị ndị ọzọ